Bogga ugu weyn Sida Loogu Iibsado Beeraha Beeraha Maalgashiga Sanadka 2021 | Hagaha Khabiirka
Waa maxay sababta aan u maalgashanaayo Beeraha?
Sida Loo Iibsado Beeraha Loogu Maalgashado
Dhulka si toos ah u iibso
Iibsiga saamiyada REIT -yada qaaska ah oo diiradda lagu saaray dhulka beeraha
Maalgeli iyada oo loo marayo madal dadweyne badan oo diiradda saaraya beeraha
Waa Maxay Halista Maalgelinta Beeraha?
Taariikh ahaan, inta badan dhul -beereedka waa la iska dhaxlaa oo jiilba jiil ayuu iska dhaxlaa, wuu ka tagaa maal- "Ka baxsan ciyaarta." Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray fursado kordhay oo loogu talagalay soo jiidashada maalgashadayaasha danaynaya inay iibsadaan dhul -beereedka maalgashi ahaan.
Maqaalkan, waxaan ku sahamin doonnaa fikradda ah iibsashada dhul beereed si loogu maalgashado sidoo kale waxaan kugu socodsiin doonnaa habka loo iibsado dhul -beereedka maalgashiga.
'Khudaarta mar walba lagama helo dheriyo'. Helitaanka dhul -beereedka ee maal -gashiga ayaa si aad ah uga sii dheeraan kara oo kaliya alaabta cuntada la isticmaalo.
Tusaale ahaan, dalagyada sii kordhaya ee sidoo kale loo adeegsado soo saarista shidaalka noolaha, kuwaas oo weli ah kuwo aad loogu baahan yahay, waxay sidoo kale noqon doonaan hawlgal macquul ah oo macquul ah.
Kahor intaanan ka hadlin sida loo iibsado dhul beereed si loogu maalgashado, aan kuu ogaano sababta aad u maalgashanayso dhul beereedka.
Hoy u noqoshada cagaarka cuntada waaxda wax -soo -saarka, maalgashiga dhulka beeraha waa mid aan waligeed dhiman - waa maal abuuraa, xoojiya hanti, iyo xoolo badiya.
In 2019, ka Macluumaadka Tamarta Maraykanka Maamulka ayaa ku dhawaaqay in dhalinta korontada ee marawaxadaha dabaysha ay matalaan 7.3% wadarta korontada ee cabirka korontada ee Maraykanka. Tixgeli xaqiiqda ah in tan iyo 2000, korontada dabayshu dhaliso ay ka korodhay 6 bilyan illaa 300 bilyan oo kilowatt-saac (kWh). Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hakiso oo aad ka fikirto xogtaas!
50 -kii sano ee la soo dhaafay, qiimaha dhul beereedka Mareykanka ayaa sare u kacay qiyaastii 6.1% sanadkiiba, iyadoo shan sano oo kaliya ay hoos u dhacday muddadaas. Laga soo bilaabo 1991, dhul -beereedka wuxuu soo saaraa soo -celin togan sanad walba, taasoo dhalisa celcelis celcelis celcelis ahaan 11.5%, sida ay sheegtay USDA. Si dib -u -celintaas loo eego, waxay ka sarreysay dhammaan fasallada hantida kale marka laga reebo Tusmada Dow Jones REIT intii lagu jiray muddadaas.
ARAG SIDOO KALE: Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Arrimaha aan kor ku soo sheegnay ayaa si dhab ah u xaqiijinaya waxqabad sare faylalka kuwa ku fikiraya inay iibsadaan dhul beereed sidii maalgashi.
Sidoo kale, maal -gashadayaashu waxay si toos ah uga iibsan karaan milkiilaha oo u kiraysan karaan qof kale, ama xitaa dib ugu celin karaan dhulal kale sidii dhul -beereed. Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto inaad maal gashato dhul beereed adigoon gacmahaaga wasakhayn, waxaad sidoo kale ku maalgashan kartaa dhul beereed hantida maguurtada Kalsoonida maalgashiga (REITs), kuwaas oo ah baayacmushtariyay sida saamiyada, ama iyada oo loo marayo madal dadweyne badan, sida FarmFundr.
Maalgashiga dhulka beeraha wuxuu isku daraa soo jiidashada hantida la taaban karo celinta sanadlaha ah 12%. Si kale haddii loo dhigo, iibsashada dhul -beereedka maalgashiga, oo ay weheliso sii wadidda faylalka kala duwan, laga yaabee sharad caqli -gal ah oo loogu talagalay guusha maaliyadeed ee mustaqbalka. Sida laga soo xigtay Forbes, maalgashadayaashu waxay lacag ku samayn karaan laba siyaabood: laga bilaabo kirada lacagta caddaanka ah ee ay beeralaydu bixiyaan si ay u isticmaalaan dhulka iyo weliba koror joogto ah oo ku yimaada qiimaha dhulka.
LA XIDHIIDH BADAN: 11 Siyaabood oo aan la adeegsan si lacag looga helo dukaanka google play
Beeraha ayaa sannadihii u dambeeyay u kobcayay sidii hanti hanti u ah maalgashadayaasha iyadoo la soo saaray habab cusub oo lagu maal -geliyo waaxda. Waa tan fiirinta sida maalgashadehu ugu dari karo xoogaa dhul beereed ah faylalkooda.
Akhri ALSO: Siyaabaha Ugu Wanaagsan Ee Loo Iibsado Dahabka 2021 | Hoggaamiyaha Khubarada
Tani waa hab cad oo aan kala go 'lahayn oo lagu maalgashan karo dhul beereedka. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad iibsato dhul -beereedka la adeegsan karo ama dhul -beereedka oo aad ka kiraysato xoolo -dhaqato ama beeraley.
Habkan maalgelinta beeraha wuxuu leeyahay qiime hore oo la qiyaasi karo maadaama maalgeliyuhu u baahnaan doono inuu iibsado dhul ballaadhan. Celceliska sicirka dhulka ee dalagga dalagga wuxuu ahaa $ 4,130 acre sanadkii 2018, halka daaqa uu ku kacayay $ 1,390 acre, sida laga soo xigtay USDA. Dhanka kale, maal -gashadayaashu waxay sida caadiga ah ku kireeyeen dhul -beereedka $ 138 acre iyo dhul daaqsimeed dhan $ 12.50 halkii acre, taasoo la micno ah soosaarka lacag caddaan ah oo ah 3.3% iyo 0.9%, siday u kala horreeyaan.
Maalgashadayaasha iibsada dhulka si ay u maal gashadaan beeraha waxay leeyihiin dhowr ikhtiyaar, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay saamiga faa'iidooyinka iyo khasaaraha:
Iibsashada beer hadda jirta iyada oo loo marayo macaamil-iibis-leaseback, halkaas oo qofka beeraleyda ah uu weli shaqaale ka yahay beerta inta uu kirada siinayo milkiilaha cusub. Macaamil-iibis-kiraysigu wuxuu u muuqdaa midka ugu khatarsan uguna macquulsan ee sida tooska ah loo maal-geliyo dhul-beereedka. Si kastaba ha ahaatee, beddelkeeda, maalgeliye ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu bixiyo qiimo ka sarreeya dhulka iyo kasban lacag kaash hoose ah dhalid
Waxaad kaloo dooran kartaa inaad iibsato dhul beereed jira oo aad kiraysato kirayste cusub. Ikhtiyaarkan inkasta oo uu xiiso leeyahay wuxuu u baahan doonaa raadinta kiraystaha saxda ah ee beerta.
Helitaanka dhul -beereedka iyo u -isticmaalkeeda si loo abuuro shidaal -biyoodyo, kuwaas oo weli ku jira baahi weyn, waxay kaloo noqon doontaa raacitaan dhab ah oo macquul ah. Ha iloobin adeegsiga dhul -beereedka beeraha dabaysha.
U beddelidda dhul -beereedka waxay leedahay awood ay ku soo saarto soo -celinta ugu sarreysa tan iyo markii maalgashade ay u badan tahay inuu awoodo inuu ku iibsado dhul qiimo hoose, sidaas darteedna, wuxuu kasban karaa dhalid lacag caddaan ah oo sareysa oo laga yaabo inuu ka faa'iideysto qiimeynta qiimaha sare ee dhulka. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarkan wuxuu u baahan yahay shaqada ugu badan maadaama maalgeliyuhu u baahan doono inuu beddelo dhulka beeraha si loo isticmaalo.
Laba si guud baa loo kala iibsaday Amaanooyinka maalgashiga guryaha (REITs) hadda diirada saaraya helitaanka dhul beereed iyo kiraynta beeralayda:
Iskaashatada Beeraha (NYSE: FPI).
Shirkadda Gladstone Land Corporation (NASDAQ: DHUL).
Iskaashatada Beeraha waa kan ugu weyn ee REITs dhul -beereedka sida guud looga ganacsado ee Mareykanka. Laga soo bilaabo bartamihii 2019, waxay lahayd qiyaastii $ 1.1 bilyan oo hanti ah, oo ay ku jiraan 158,000 hektar oo dhul beereed ah oo ku yaal 17 gobol. Waxay u kiraysay dhulkan in ka badan 100 kirayste oo beera 26 nooc oo dalagyo ah, 57% ka mid ah waa dalag isku xiga (galley, soybeans, bariis, iyo suuf) iyo 42% oo ah dalagyo aan isbeddelin oo khaas ah (yicib, avocados, canab khamri ah) , miro aan geed ahayn, iyo khudaar).
Dhulka Gladstone wuxuu leeyahay 111 beerood oo leh 86,534 hektar oo dhan 10 gobol oo lagu qiimeeyay $ 876 milyan. Waxay inta badan diiradda saartaa dhul -beereedka loo isticmaalo in lagu beero cuntooyinka caafimaadka leh sida miraha, khudaarta, iyo lowska.
Maal-gashade kasta oo leh koonto dilaalnimo iyo lacag ku filan si uu u iibsado hal saami wuxuu ku maalgelin karaa dhul-beereedka REITs, taasoo ka dhigaysa habka ugu habboon uguna jaban ee lagu maal-geliyo dhul-beereedka. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah waxay ka ganacsiga sarrifka saamiyada, waxay u muuqdaan kuwo aan xasilloonayn.
ARAG SIDOO KALE: 10 Adeegyada Xulidda Lacag -La'aanta ugu Fiican
Xulashada kale ee REIT waa Beeraha Beeraha Dooxada REIT. Kani waa REIT dadweyne oo aan ganacsi ahayn oo u furan dhammaan maalgashadayaasha laakiin aan ku ganacsan sarrifka saamiyada. Shirkadu waxay diiradda saareysaa lahaanshaha faylalka tacliinta ee dhul beereedka dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay maalgelin aad u sareysa oo ka badan $ 10,000, maalgashadeyaashuna ma iibsan karaan saamiyadooda muddo shan sano ah.
Shirkado kala duwan ayaa sameystay sanadihii la soo dhaafay si ay u oggolaadaan maalgashiga dhulka beeraha iyagoo adeegsanaya internetka. Si kastaba ha ahaatee, inta badan dhul -beereedyadan dadku ku badan yihiin waxay u furan yihiin oo keliya maalgashadayaasha la aqoonsan yahay - kuwa leh qiima saafiya oo ka badan $ 1 milyan marka laga reebo sinnaanta hoygooda koowaad ama dakhli sare oo ah $ 200,000 labadii sano ee la soo dhaafay, ama $ 300,000 haddii ay isqabaan .
Halkaan waxaa ah liisaska meheradaha dadku ku badan yihiin oo diiradda saaraya beeraha
AcreTrader waa madal dadweyne fara badan oo siisa maalgashadayaasha la aqoonsan yahay inay si toos ah u helaan dhul -beereedka. Inta badan bixinnadeedu waxay u baahan yihiin maalgaliye si uu u iibsado 10 saamiyo, oo u dhiganta hal hektar oo dhul ah oo guud ahaan qiimihiisu u dhexeeyo $ 3,000 iyo $ 10,000 halkii acre. Halkii ay lahaan lahaayeen lahaanshaha sharciga ah acre -ka dhulka, maalgashadayaashu waxay leeyihiin saamiyo ku leh shirkad xaddidan oo xaddidan (LLC) oo leh lahaansho sharci.
FarmFundr waa madal dadweyne badan oo u saamaxaysa maalgashadayaasha la aqoonsan yahay inay maalgashadaan fursado kala duwan sida dhul beereedka iyo tas -hiilaadka beeraha.
#3 FarmT wadajir
FarmTogether waa suuq suuq online ah oo loogu talagalay maalgashiga dhul beereedka. Waxay awood u siineysaa maalgashadayaasha la aqoonsan yahay inay si toos ah u helaan fursadaha maalgashiga dhul-beereedka Mareykanka ee horay loo-hubiyay. Maalgashadayaashu waxay isla markiiba maalgelin karaan beero gaar ah ama sanduuq ay ku jiraan maalgelinno beero oo dhowr ah.
#4 Beeraha LP
Farmland LP wuxuu xooga saaraa iibsashada dhul beereedka badeecada oo u beddela dhul beereed dabiici ah oo aad u qiimo badan. Waxay siisaa maalgashadayaasha la aqoonsan yahay fursad ay ku galaan sanduuq sinnaan oo gaar loo leeyahay kaas oo leh ballaarinta aakhirka noqoshada REIT oo noqota mid dadweyne.
#5 Soo Celinta Dalagga
Soo Celinta Harvest -ka waa madal dadweyne badan oo bixiya tiro badan oo heshiisyo beeraha ah oo inta badan u furan maalgashadayaasha la aqoonsan yahay.
Steward waa madal dadweyne badan oo udub dhexaad u ah maalgelinta beeraha waara. Waxay ujeeddadeedu tahay in beeraleyda la siiyo raasumaal (qaab amaah ah) si ay u sii wadaan una ballaariyaan beerahooda.
Sida ay u muuqato wax walba oo soo jiidasho leh si aad u iibsato dhul beereed maalgashi, waxaa jira khataro yar oo waaweyn oo la xiriira maalgelinta dhulka beeraha. Mid ka mid ah taas oo ah dareere. Haddii aad leedahay dhul -beereed jireed, dhulka si fudud laguma iibin karo haddii aadan ku lug yeelan adeegyada dilaaliinta. Dareenkan, wuxuu ka dhigayaa meheraddu maalgashi aan caqli gal ahayn sababta oo ah la'aanta istiraatiijiyad bixitaan oo qeexan.
Dhul -beereedka dad -weynaha ah ee ETF -yada ayaa ka takhalusi doona dhibaatada xisaabaadka iyagoo si sahlan u iibsan kara kuna iibin kara dillaaliyeyaasha internetka.
Khatarta labaad ee la xiriirta dhul -beereedka waa dhibaato aqooneed. Marka laga reebo inaad si fiican ula sheekaysato fasalka hantida, way adkaan kartaa inaad ku iibsato dhul qiimo wanaagsan. Haddii aad lacag dheeraad ah bixiso, waxaa laga yaabaa inaad ku dhegto hanti aan loo baahnayn muddo dheer. Kuwa aqoonta buuxda u leh waaxda beeraha ayaa laga yaabaa inay yareeyaan halistaan ​​iyagoo iibsanaya kaliya dhul gaar ah oo buuxiya shuruudahooda shaqsiyeed. Guud ahaan, si guud-ETFs ganacsi xallinta arrintan adiga oo leh iibsadayaal iyo iibiyayaal badan. Guud ahaan, aqoonta aan dhammeystirnayn ee iibsadayaal iyo iibiyeyaal badan ayaa u horseedaya qiimo macquul ah saamiyada.
15ka Kayd ee ugu Sarreeya ee Bixiya Bixiyayaasha Billaha ah & ETF -yada
Wadajir wuxuu yareeyaa khataraha isagoo la kaashanaya khubarada warshadaha beeraha iyo khubarada maaraynta dhulka beeraha. Wada -shaqaynta, FarmTogether waxay kasbatay fahamka khataraha badan ee la xiriira iibsashada dhul -beereedka si loo maalgashado waxayna kharashyadaas ku karsan kartaa heshiisyo.
Isku soo wada duuboo, habka ugu wanaagsan ee looga adkaan karo khataraha laga fogaan karo waa iyadoo la dhegeysto la -talinta khabiirka iyo la -socodka cilmi -baarista.
Si aad u gasho aaggan hodanka ah, waxaad u baahan tahay aqoonta si taxaddar leh loogu habeeyay maqaalkan. Akhri oo fikradda ka hel.
forbes.com - Sababta Maareeyayaasha Lacagtu Ugu Dhaqaaqayaan Dhul Beereed
finanpoise.com - Ma Ku Heli Kartaa Maalqabeen Iibsashada Beeraha Maalgelin ahaan?
nacasnimo.com - Maalgelinta Dhulka Beeraha: Tilmaamaha Maal -gashadeyaasha Guryaha
thecollegeinvestor.com - Sida Loo Maalgeliyo Dhulka Beeraha
Fast Bixinta shaqooyinka 18 jirka ah sannadka 2020
21+ Kooxaha Diirad -bixinta Lacag -bixinta ee Online -ka ugu Fiican 2020 | Samee in ka badan 400/saac
Dooxada 15 stardew Valley habka ugu wanaagsan ee lacag lagu kasbado Talooyin 2020 | Cadeeyay
8 Siyaabood Oo Lacagtaadu kuugu Shaqayn Karto